Hrithik Roshan oo markaan filim la soo wado Nin In Badan Xabsi ku jiray waa kee Ninkaas ? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Bollywood » Hrithik Roshan oo markaan filim la soo wado Nin In Badan Xabsi ku jiray waa kee Ninkaas ?
Hrithik Roshan oo markaan filim la soo wado Nin In Badan Xabsi ku jiray waa kee Ninkaas ?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-07-16 9:31 AM Boqorka Qoob Ka Cayaarka Hrithik Roshan ayaa mar kale la shaqeyn doono Tunweynaha haatan soo dhameestay Xabsiga Sanjey Dutt Hrithik iyo Sanjey ayaa ka soo wada shaqeyay filimada kale ah Mission Kashmir iyo Agneepath Mission Kashmir ayaa soo baxay sanadkii 2000 waxaana oo noqday mid top ah sido kale filimka Agneepath Ayaa asna soo baxay 2012 Filimkaan ayaa asna noqday mid lala dhacay .
Magaca filimka lagu arki doono labadaan xidig ayaa lagu Sheegay Fighter magaca filimka ayaa laga dheehan karaa in oo yahay Mid Dagaal Hrithik Iyo Sanjey hadii ee isla kenaan filimkaan waa hubaal waxa oo noqonayaa mid Bollywood Qabsado Howsha filimkaan ayaa lagu wado in ee bilaawato dhamaadka sanadka aanu haatan ku jirno.
Hrithik ayaa haatan ku howlan filimkiisa soo bixi doono bisha inagu soo fool leh waana filimka Mohenjo Daro sido kale xidigaan ayaa so wado filimka Kaabil filimkaan ayaa la wadi doono ninka ku fashilmay Bollywoodka Shahrukh Khan .